Hada wasakhowga hawada ayaa ah mid aad iyo aad u xun, isticmaaleyaal badan ayaa xirto maaskaro, maaskaro la isticmaali karo waa kuwa ugu badan ee ay adeegsadaan dadka isticmaala suuqa. 1. Maqaar jilicsan oo la adeegsan karo oo lagu sameeyo samaynta alaabada sidoo kale waa mid aad u fiican, marka adeegsiga saaxiibada waji gashida ayaa sidoo kale si toos ah u dareemi kara qoraalka sheyga ...
1. Waxqabadka xakamaynta wasakhda Awoodda boodhka maaskarada waxay kuxirantahay kartidooda xanibaadda ee boodhka, gaar ahaan boodhka la jecelyahay ee ka hooseeya 2.5 microns. Sababtoo ah cabirka qashinkan ee boodhku wuxuu toos u geli karaa alveoli, caafimaadka aadanaha ayaa sababay saameynta ugu weyn. Bixiyayaal wasakh leh, oo sameeyay ...
1. Xiro maaskaro inta lagu guda jiro xilliga hargabka sare, maalmaha qiiqa iyo boodhka, marka aad xannuunsato ama aad aadid isbitaalka si aad u hesho daweyn caafimaad. Xilliga jiilaalka, dadka da'da ah ee difaaca liito, dadka jiran ayaa sifiican u xirto maaskaro markay baxayaan. 2. Inta badan maaskaro midab leh ...
Ku dhex kululee biyo karkaraya 5 daqiiqo Marka hore karkar digsi biyo karkaraya ku shub weelka meesha maaskaarka lagu dhigo. Haddii ay tahay baaquli caag ah, biyo karkaraya ayaa lagula talinayaa in la qallajiyo marka hore, ka dibna ku qoo maydho maaskaro. Hadday jiraan POTS ceramic POTS soojeedin inaad ku qubto POTS ceramic. Nadiifi dhoobada ...
1. Maaskaro ilaalin caafimaad Iyadoo la raacayo gb19083-2003 shuruudaha farsamada ee kaydka daawada, tilmaamayaasha farsamo ee muhiimka ah waxaa ka mid ah hufnaanta shaandhaynta iyo iska caabbinta qulqulka walxaha aan saliida lahayn: (1) hufnaan sifeynta: hoosta socodka socodka hawada (85 ± 2) L / min, shaandheynta e ...
1. Dhaq gacmaha inta aadan xirin maskiinka iyo ka hor iyo ka dib qaadista maaskarada; 2. Maska ku hay wejigaaga meel u dhaw: dhinaca midabkiisu daboolan yahay maaskaro xaggiisa bannaanka iyo dhinaca birta ah wejiga; Ku adkee xargaha xirta maaskarada si adag, ama ku duub xargaha caagga ah ee maaskaro ee dhegaha si m ...
Khubaradu waxay sheegeen marka lagu daro bixinta wax ku ool ah, maaskaro xirashada waa inay sidoo kale tixgelisaa raaxada weheliyaha, ma keenayso khataraha bayooloji iyo waxyeelada kale ee xun. Guud ahaan marka la eego, waxqabadka sare ee ilaalinta maaskaro, saameynta weyn ee waxqabadka raaxada. W ...
Halbeeggu waa tilmaamayaasha farsamo ee ugu waaweyn ee loo dejiyay sida waafaqsan astaamaha badeecada, GB / T 32610-2016 qeexitaanka farsamada ee maaskaro ilaalin maalinle ah, isku-darka GB2626-2006 “ka hortagida nooca shaandhada neefsashada ee iskiis u shaqeysta”, GB19083-2010 “Neefta neefsashada, A ...
Maaskaro qalliinka. Sida laga soo xigtay YY, 0469-2004 “Maaskaro qalliin caafimaad, shuruudo farsamo, qeexida maaskaro qalliin caafimaad oo loogu talagalay shaqaalaha caafimaadka kiliinikada aagga ku shaqeynaya jijimooyinka, ee loogu talagalay bukaannada ku jira daweynta iyo hirgelinta iyo qalliinka ...
Hada masaska ugu caansan ee la xusay waxaa ka mid ah KN95, N95, maaskaro qalliin, iwm. Tan koowaad waa masaska KN95. Marka loo eego kala-soocidda heer-qaran ee heerka sare ee2626-2006 “shaandhaynta iskaa-u-nuugista ee qalabka neefsashada ee ka-hortagga qalabka neef-mareenka”, maaskaro ayaa loo qaybiyaa ...
YY 0469-2004 shuruudaha farsamada ee maaskaro qalliinka loogu talagalay isticmaalka daawada waxaa soo saaray maamulka dawooyinka iyo cuntada ee gobolka oo ah heer warshadeed oo dawooyin ah waxaana la hirgaliyay Janaayo 1, 2005. Halbeegaani wuxuu qeexayaa shuruudaha farsamada, hababka tijaabada, calaamadaha iyo tilmaamaha isticmaalka, ...
Waqtigan xaadirka ah, shuruudaha ugu weyn ee ay ka mid yihiin GB 2626-2006 oo ku saabsan waji xidhka qalabka difaaca neefsashada ee is-hor-istaagga ah waxay ka hortageysaa shay baarista nooca qalabka neefsashada ", GB 19083-2010" shuruudaha farsamada ee qalabka neefsashada daawada ah ", YY, 0469-2004" Mashiinka qalliinka mashiinka mashiinka looga baahan yahay. ..